Kuqhilike izinhlathi bethweswa imiyezane ngamakhono abanawo – Sivubela intuthuko Newspaper
Kuqhilike izinhlathi bethweswa imiyezane ngamakhono abanawo
ABAFUNDI abebethweswa imiyezane ngaphansi kohlelo loMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal.
UNGQONGQOSHE woMnyango wezokuThukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uNkk Nonhlanhla Khoza uphensele inselelo abamtnu abasha yokungajahi ukugijimela izinto ngezindlela eziwubukhoshosho kodwa mabasebenze kanzima ukufezekisa amaphupho abo.
UNkk Khoza uyale kanje kade kuthweswa imiyezane abantu abasha abangu-463 abebeqeqeshwa yilo mnyango ngaphansi kohlelo lwamakhono ahlukahlukene ukuthola impilo engcono. Ugcizelele kubantu abasha ukuzinikela kwabakwenzayo ukuze amaphupho abo afezeke ethi uhulumeni uzinikele ekubafukuleni ukuze nabo babe utho esizweni. Laba bahlimule ngezitifiketi kusukela emkhakheni wokucwala kwezinwele (NQF4), ekuhlanzeni izakhiwo (NQF1) kuze kube sekuphathweni kwamabhizinisi imbala (NQF4).
Ekhuluma lapha uNkk Khoza uthe umnyango wabo uphokophelele ekuphuculeni impilo yabantu abasha ukuze bangazithole beyimilutha yezidakamizwa. “Sifuna ukubona abantu abasha bethuthuka empilweni yabo. Sifuna ukubona abantu abasha bebambe iqhaza ekukhuliseni umnotho wezwe lethu. Sifuna ukubona lobu dlelwano esesibakhile buphumelela ngokuthela izithelo ezinhle. Abantu abasha kulezi nsuku babhekene nomqansa ekuthuthukeni njengoba ngakolunye uhlangothi benukubezwa, badlwengulwe nokunye okungalungile. Ngalezi tifiketi esizidlulisa namhlanje sisempini yokulwa nobubha obuhlasele abantu abasha,” usho kanje.
Eqhubeka uNkk Khoza uthe bewumnyango bazimisele ukulalela noma ngabe ngubani umuntu omusha. Uthe bazibphezele ekuboneni abantu abasha bethuthuka kuze kuzuze imindeni yabo ngamakhono abo abanawo. “Lezi tifiketi sizithatha njengokhiye wokuvuma iminyango eya empumelelweni yenu. Lolu hlelo saluqala ngo-2016 futhi siyazibona izithelo zalo njengoba banatu abaningi sebehlomulile ngalo ekuxosheni ikati eziko emakhaya abo. Siwumnyango sizimisele ekunilekeleleni ngalezi tifiketi ngokuthi nibe nemiphilandawonye enizoba kuyona ukuze nikwazi ukuphila ngamakhono enu,” usho kanje.
Uthe ngalolu hlelo lwabo bewumnyango ngokubambisana nabe-National Qualification Framework (NQF) oluqhutshwa yiSETA babheke lukhulu ekuzuzeni kwabantu abasha ekuziphiliseni.
UNgqongqoshe uhlabeke umxhwele ngezinhlelo zeLoskop Water Treatment Plant eMtshezi